Banyere Anyị - Tianjin Oilbayer S & T Co., Ltd
Oilbayer bụ integrated elu-tech enterprise ọkachamara nnyocha mmepe, mmepụta na ahịa na oilfield chemical ọrụ ahịa. Ọ nwere ihe abụọ n'ichepụta osisi dị na Lingang Chemical Industry Mpaghara na Cangzhou, Hebei ógbè na Tianjin Binhai High-tech Mpaghara ebe bụ 12km n'ebe Tianjin International Airport na 22km si Tianjin Port.
Oilbayer bụ na-eduga oilfield chemical ọrụ na-eweta na ụwa si n'elu-notch laboratories, ọkachamara ìgwè ndị nnyocha na kacha elu siri ike na mmiri mmiri akpaghị aka mmepụta akara na China. Anyị nwere ike inye pụrụ ịdabere na oru ngwọta na ịkwa akwa mere ngwaahịa maka ndị ahịa. Anyị na-agbalị na-enye anụ arụmọrụ na a pụrụ ịdabere àgwà ngwaahịa anyị customers.At ugbu a, anyị nwere onwe ha ikike arịa amamihe, dị ka simenti ọmụmụ ọnwụ nwekwara, retarders, dispersants; mmanụ dabeere-egwu mmiri, inhibitors, Anti-sloughing na igbochi ịkwụnye gị n'ụlọnga, ẹkụre ọmụmụ wdg, na ihe karịrị 30 iche iche nke ngwaahịa na ndị n'elu kwuru banyere 7 usoro.
Ọzọkwa, anyị ịnọgide na-enwe ogologo oge nkwado na oilfield ụlọ ọrụ si Iran, Saudi Arabia, Mexico, Indonesia, Venezuela, Canada, Australia, Syria wdg Ọ bụ uru na-akọwa na anyị nwetara a nnọọ elu ogo nwale si ha tinyere NIDC , PDVSA, ONGC, BELORUSNEFT, PERTAMINA na ụlọ ọrụ PEMEX wdg
Echeta na Oilbayer motto, "Mee ka Amazing eme", anyị ọhụụ bụ bụrụ onye ndú n'etiti ụwa oilfield chemical ọrụ ụlọ ọrụ, anyị na-enyefe onwe anyị na-enye nchebe, na gburugburu ebe obibi enyi na enyi, mbụ na klas, elu-arụmọrụ na kpọrọ ọrụ anyị anụ ụlọ na mba na ahịa. Oilbayer unrelentingly agbalịsie ike na-enye mmeri-mmeri ndapụta ahịa anyị na ndị mmekọ.